Itiyoophiyaa fi Sudaan Rakkoo Daangaa Irraa Furuuf Cichaan Hojjenna Jedhan
Adoolessa 06, 2018
Ethiopia South Sudan Civil War
Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahimed erga walitti bu’iinsi qonnaan bultoota daangaa Sudaanii fi ka biyya ofii gidduutti ka’ee booda prezidaantii Sudaan Omar al-bashiriif ergaa erganii jiran.
Erga kana kan ergan kan prezidant al Bashir fi ministeera dhimma alaa biyyattii al-Dardiri Mohamed Ahmed waliin Kaartuum keessatti wal argan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa karaa Dr. Warqinee Gabayyoo ture.
Dr. Warqineen ibsa tuuta oduuf kennaniin akka jedhanitti ergaan sun hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimmoota naannoo ti jedhan.
Biyyooni lamaan rakkoo daangaa irratti uumame furuuf wal ta’iinsaa fi qindoominaan waliin ni hojjetu jedhan. Gama biraan Ahmed akka jedhanitti muummichi ministeeraa itiyoopiyaa fi prezidaant al-Bashir dhimmoota akka kanaa irra aanuuf biyyoonni lamaan lmaan cicha qabaachuu isaanii ibsan.